Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa | RayHaber | raillynews
Bursa degmada Metropolitan, hoos imaanaya hoggaanka macmalay taraamka horeysay Turkey ee wadaniga ah Silkworm, soo qayb galay shirkadaha adduunka ee keentay ee Istanbul Eurasia Rail Rail Light Rail Systems, wuxuu ahaa kibirka Turkiga ee Kaabayaasha iyo Logistics Fair. Tareenka Eurasia [More ...]
KALA-BEDDELIDDA ISWIIDHAYAASHA UGU HOREY ULUDAĞ UNIVERSITY
Go'aanka UKOME ee ku saabsan hawlgallada basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay ee leh khadadka 51, 47 iyo B / 45, kuwaas oo loo adeegsado isbarbar dhiga BursaRay ee gaadiid Uludağ [More ...]
Khadka Isbeddelka Gaadiidka Jaamacadda.
Ka dib markii Dawladda Hoose ee Magaalada Bursa ay u raacday nidaamka tareenka fudud Jaamacadda Uludağ, qaban-qaabooyin cusub ayaa laga sameeyay khadka tareenka. Marka la eego baaxadda shaqooyinka lagu qabtay iyada oo ujeedadu tahay tayada iyo gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Bursa Metropolitan, gaadiid lagu tago Jaamacadda Uludağ [More ...]
HEYKEL-GARAJ PRAMA LINE PROJECT WAXAA KA BIXIYAY MAGAALADA GUUD EE DALKA (VIDEO)
BURSA METROPOLITAN MUNICIPALITY, MAGAALO MAGAALO KU SAABSAN MADAXWEYNE SIILAANYO QIIMEYNTA MACLUUMAADKA GAADIIDKA EE JOOJINTA MADAXWEYNAHA DLH GUUD EE DALKA. - MADAXWEYNAHA MADAXWEYNAHA, SAXIIX KA DAMBEEYA DLH [More ...]
Dib-u-eegid Muhiim ah ee Khadka Kursiga Bursaray
Dawladda Hoose ee Magaalada, iyada oo ay sii wadayso shaqada khadka khadka Bursaray Kestel, Buundada Hacivat ee ku xigta labada geed diyaaradeed ee taariikhi ah si ay u aaddo mashruuca dib loo eegay si loo gooyo. Magaalo-weynta, labadaba waa taallo dabiici ah horayna waa loo jaray [More ...]
Dawlada Hoose ayaa 10 senti kor u qaadday si ay uga qaado khidmadaha gaadiidka dadweynaha. Kordhintan cusub si deggan ayaa loo fuliyay. Kuwa iyagu xakameynaya magC-magnetic BuCard oo ay taxaddar muujiyaan, sida xaqiiqda ah in wax lala yaabo ay sare u qaadaan [More ...]
Goobta Gaadiidka-Gaaranka ee Garoowe waxaa loo direy DLH Agaasimaha Guud si loo ansixiyo
Magaalada Bursa, mashaariicaha lagu diyaariyey khadka tareenka-garaash, oo ah safka ugu horeeya safka hore ee tareenka magaalada, waxaa loo diray Agaasinka Guud ee Tareenka, Dekadaha iyo Dhismaha Garoomada Diyaaradaha (DLH) si loo ansixiyo. Abriil kadib markii la oggolaaday [More ...]
Waddada Bursa-Ankara waxay ku neefsan doontaa buundooyinka cusboonaysiinta
Dawladda Hoose ee Bursa, taas oo bixin doonta ku habooneyn gaadiid iyada oo loo eegayo baaxadda dhismaha bariga ee BursaRay'ın 1960'lı sano oo la dhisay Hacıvat, Balıklı iyo buundooyinka Deliçay. Degmadu waxay jabineysaa buundooyinka cusub ee nus qarniga. [More ...]
In 15 billion 45 ku doolar sannad ah ayaa loo baahan yahay si ay u gaari rail Turkey
Bursa waa xoog ugu muhiimsan oo wakiil ka ah warshadaha Bursa Duqa Recep Altepe, ayaa sheegay in noocyada qoyska iyo baahida Bursa Turkiga. Dalxiisayaasha meelo badan oo Yurub ah [More ...]
Qaar ka mid ah buundooyinka ayaa la burburin doonaa qaybta Bustaray ee Kestel line
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa waxay bilawday burburka buundooyinka wadada Ankara laga bilaabo Hacivat berri. Dhismaha ayaa la qorsheeyay in uu bilo bil gudaheeda kadib markii dumarku dhamaado. Baaxadda khadka Kestel ee Bursaray, Hacivat, Balıklı [More ...]
Xilliga Is-beddelku wuxuu noqonayaa Taariikhda Bursaray
Waqtiga wareejinta ee Bursaray waxay Noqotaa Taariikh: In kasta oo Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa ay sii wadayso shaqadeeda si ay u balaariso shabakada nidaamka tareenka, waxay sidoo kale sameyneysaa isbadal joogto ah oo qadka hada jira. this [More ...]
107 Gaadiidka Sannadlaha Ah Oo Laga Saaray Jamhuuriyadda Imaginary (Video)
Dawlada hoose ee magaalada Bursa waxay taraarka korantada u keentay Bursa 107 sano kadib. Duqa Magaalada Bursa Recep Altepe wuxuu cadeeyay in hadafka magaalada lagu xidho shabaq bir ah lagu wareejiyay ajandaha qarnigii hore. [More ...]
Mukhtar ayaa soo saarey taraam
BURSA BUYUKSHIR MUNICIPALITY TRAMVAY OO KOOBAN BURSA, OSMANGAZI IYO YILDIRIM REGION ee gobolka ayaa qaatay calaamado buuxa. BURSA - Gawaarida ay Bixiso Magaalada Bursa oo ay leedahay Dowlada Hoose ee Magaalo Xeebeedka ayaa u adeegta gobolka inta udhaxeysa Cumhuriyet Street iyo Davutkadı [More ...]
Baydhabo qaldan - Erdem Saker
Khadka BursaRay Labour oo leh furitaanka xariiqda qadka dhismaha wadahadalada socda ee rajada ah in dhamaadka uu sii wadi doono inuu igu riixo mar labaad si aan u sameeyo baaritaanka saxda ah / qaldan ee BursaRayda. Necati Sahin, Gudoomiyaha IMO Bursa Laanta, [More ...]
« 1 ... 55 56 57 »